Bethel Bea a Wɔdorɔw Mfonyin, U.S.A.
Bethel yɛ Hebrew dzin a ɔkyerɛ “Nyankopɔn ne fie.” (Genesis 28:17, 19) Ɔyɛ dzin a ɔfata a wɔdze ama adan ahorow a Jehovah Adasefo esisi wɔ wiadze mfɛndzanan nyina, na hɔ na wofi hwɛ asɛmpakã edwuma no do na wɔdze ho akwankyerɛ ma. Akwankyerɛ Kuw no som wɔ wiadze nyina edwumayɛbea tsir wɔ New York State, U.S.A., na hɔ na wofi hwɛ edwumayɛbea nkorbata ahorow a ɔwɔ aman pii do no hɔn dwumadzi do. Hɔn a wɔsom wɔ mbea ahorow yi kã bɔ mu yɛ kuw kor, na wɔfrɛ hɔn Bethel ebusua. Tse dɛ ebusua no, wɔtse fakor, wɔyɛ edwuma bɔ mu, wodzidzi bɔ mu, na wɔdze koryɛ sũa Bible no.​—Ndwom 133:1.
Ɔyɛ bea soronko a ebusua no mufo wɔ ahofama sunsum. Wɔ Bethel fie biara mu no, Christianfo mbarimba nye mbaa wɔ hɔ a woetu hɔnho akyɛ reyɛ Nyankopɔn n’apɛdze na wɔdze hɔn ber nyina reyɛ Ahendzi edwuma no. (Matthew 6:33) Hɔn mu biara nngye akatua, na mbom wɔma hɔn edziban, dabew nye sika kakra a wɔdze twitwa hɔnho. Obiara a ɔwɔ Bethel no wɔ edwuma a ɔyɛ. Binom yɛ hɔn edwuma no wɔ ɔfese, gyaadze anaa edzidzibea. Afofor yɛ edwuma wɔ beebi a wotsintsim anaa wɔyɛ nwoma ahorow, beebi a wɔhor ndzɛmba, anaa beebi a wosiesie mfir ahorow. Binom so siesie adan mu anaa wɔyɛ ndwuma afofor so.
Ɔyɛ bea a wɔyɛ edwumadzen dze taa Ahendzi asɛmpakã edwuma no ekyir. Bethel biara no botae tsitsir nye dɛ ɔbɛma nyimpa dodowara atse Bible mu nokwar no ho asɛm. No ho nhwɛdo kor nye nwomaba yi. Akwankyerɛ Kuw no na ɔhwɛe ma wɔkyerɛwee, na wɔdze faa kɔmpiwta do kɛmaa kasa asekyerɛ ekuw ɔhaha pii a wɔwɔ wiadze nyina no ma wɔkyerɛɛ ase. Afei, wɔdze mfir a otsintsim nwoma ntsɛntsɛm tsintsimii wɔ Bethel nwoma tsintsimbea ahorow bi mu, na wɔdze monaa asafo ahorow a hɔn dodow bɔbor 115,000. Wɔ edwuma yi ne fã biara mu no, Bethel mbusua boa kɛse ma wɔyɛ edwuma a ɔgye ntsɛmpɛ sen biara​—Ahendzi asɛmpakã edwuma no.​—Mark 13:10.
Woananom na wɔsom wɔ Bethel, na wɔyɛ dɛn hwɛ hɔn?
Ebɛn edwuma a ɔgye ntsɛmpɛ na Bethel dwumadzi biara boa?
Video Tsiabaa: Jehovah Adasefo Wiadze Nyina Asɛnka Ɔsatu
Hwɛ siantsir a wɔdze ndɔnhwer ɔpepepem pii rekã asɛmpa no wɔ kasa ɔhaha pii mu no.